Posted by mr sann oo at 6:45 PM3comments
Why i BLOG ကိုတော့ တော်တော်လေးပဲရေးပြီးပါပြီ.. သို့သော်လည်း ainmetdiary.blogspot.com ၏အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့် What is BLOG ကိုထပ်မံရေးလိုက်ရပါကြောင်း။
Blog ဟူသောဝေါဟာရသည် Web log မှတဆင့် ဆင်းသက်လာရသည်။ Verb form အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် maintain or add content toablog
လို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ Blog သည် ဂျာနယ်စတိုင်ဖန်တီးထားသည့် Web site ဖြစ်သည်။ သာမန် Blog တစ်ခုသည် အခြား Blog များ Web site
များနှင့် link လုပ်ထားကြသည်။ ရေးသားထားသော Topic တစ်ခုစီအတွက် သီးခြား Comment များပေးနိုင်သည်။ Blog အများစုသည် Text ကိုအခြေပြု
ထားသည်။ သို့သော် photographs (photoblog), videos (vlog), audio (podcasting) များစုစည်းထားသည့် Blog များလည်းရှိကြသည်။
November 2006 တွင် blog search engine ၏ ရှာဖွေမှုအရ Blog site ပေါင်း သန်း ၆၀ ခန့်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Defination of Blog (Blog ဆိုတာဘာလည်း ?)
A blog isajournal (online diary) made available on the Internet/web by any individual.
Most blogs are maintained by people who know nothing about web site design or development.
Meaning of Blogger (Blogger ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကဘာလည်း ?)
A "blogger" isaperson who has and maintainsablog.
Meaning of "blogging?" (Blogging ဆိုတာဘာလည်း ?)
"Blogging" is the active updating ofablog by the person who maintains the postings (usuallyanon-professional).
Free Blog site များကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.
Posted by mr sann oo at 6:43 PM 1 comments
အထက်ပါ link က site ရဲ့ Album menu မှာ link လုပ်ဘို့စိတ်ကူးထားတဲ့ PhotoAlbum ပါ။ ဓါတ်ပုံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘေးမှာ ကဗျာတိုလေးတွေထည့်ချင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတိုင်း ရေးပြီးပို့ပေးပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by mr sann oo at 6:58 PM4comments
http://www.index-menwear.blogspot.com ကို upgrade လုပ်ထားပါတယ်..IE မှာ Flash ကအလုပ်လုပ်ပြီး ... Mozilla Firefox မှာအလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..browser တွေရဲ့ problem လား webpage ရဲ့ problem လားသိတဲ့သူတွေပြောပြပေးကြပါဦး.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Posted by mr sann oo at 8:07 PM2comments
Posted by mr sann oo at 7:11 PM2comments
မြန်မာ blogger များစုစည်းပြီး ပညာဖလှယ်ကြတာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တခုပါပဲ.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တော့ တောင်မရောက်မြောက်မရောက်မို့ ဘေးကပဲအားပေးချင်တယ်..အခုရက်ပိုင်း အလုပ်တွေကများပြီး သိပ်လည်းမအားဘူး..post အသစ်တွေတင်ချင်ပေမဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး..မိတ်ဆွေ blogger တွေစီလည်းစိတ်ပဲ ရောက်တယ်..visit မလုပ်ဖြစ်ဘူး..ဒီကြားထဲ www.check-menwear.blogspot.com တစ်ခုလုပ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ် ..blog နဲ့ငွေရှာချင်တယ်.. blog ကိုအများကြီးဆက်ပြီးလေ့လာရဦးမှာပဲနော် ...Firefox နဲ့ဆို plugin flash player install လုပ်လည်း browse လုပ်တဲ့အခါမှာ flash file ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..why ??? သိတဲ့သူရှိရင်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်..cbox ကိုဝင်ချင်ရင်
top banner မှာ point လုပ်လိုက်ပါ။ :)
Posted by mr sann oo at 4:33 AM4comments
စိုးဇေယျထွန်းရဲ့ comment လေးပါ။ Floder Lock ကို စမ်းသပ်သူများအတွက် သိထားသင့်တယ်ထင်လို့ post လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..ကိုစစ်ကိုင်းရေကြည့် စမ်းနော်..
အဲဒီကောင်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့ကွန်ပျူတာကို ဒုက္ခပေးသွားတာ။ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်က ဆိုင်းအင်လုပ်ထား တုန်းမှာ အောရယ်ဂျင်နယ် ဆော့ဝဲကို သွားဖျက်ရင် ပျက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိုဒါတွေကတော့ လော့ကျရက် တန်းလန်းကြီး ဖြစ်သွားတယ်
Posted by mr sann oo at 7:56 PM2comments
အလှူ လ္ဘက်နှင့် မျက်နှာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ စာအုပ်ဖတ်ဘို့အချိန်မရတဲ့သူတွေ အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ web site အညွှန်းကို
(1) သိပ်လှတဲ့ icon လေးတွေအခမဲ့ရချင်တယ်ဆိုရင် http://freeiconsweb.com
(2) ရီမောဘွယ်ရာလှပတဲ့ greeting card လေးတွေသူငယ်ချင်းတွေဆီကို ပို့ဘို့အတွက် ဆို http://www.6ecards.com နဲ့ http://www.egreetings.com
(3) အခမဲ့ download လုပ်ဘို့ software လေးတွေကိုတော့ http://www.bestfree.com
(4) အလုပ်တွေများပြီးစိတ်ရှုပ်နေရင်တော့ http://www.comedycentral.com ကိုသာသွားလိုက်ပါ.
(5) ဘောလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ http://www.soccersquared.com မှာပိုစတာတွေ background တွေ icon လေးတွေရနိုင်တယ်
(6) နောက်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအစအနတွေအတွက်တော့ http://footballwired.com ကိုသွားသင့်ပါတယ်
(7) Java, C++e-book, Hardware tips, Illustrator After Effects နဲ့အခြား software များစွာရရှိနိုင်တာက http://www.click-now.net ပဲဖြစ်ပါတယ်..
(8) freeware နဲ့ shareware တွေ အခမဲ့ download လုပ်ချင်ရင် http://www.download3000.com
(9) ကင်မရာအကြောင်းအစုံအလင်သိချင်ရင် http://www.camerapedia.org
(10) နာမည်ကြော် photoshop အသုံးပြုသူများ website ကတော့ http://www.photoshopuser.com
(11) အင်္ဂလိပ်စာ ကို listing,speaking,reading,writing စတဲ့ skills တွေရဘို့လေ့လာချင်ရင် http://www.englishpage.com
(12) IT field ရဲ့ စွယ်စုံကျမ်းမှာ မသိသေးတာတွေကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် http://www.webopedia.com/quick-ref
(13) အလွန်စွဲမက်ဘွယ်ကောင်းတဲ့ wallpaper တွေရဘို့အတွက်တော့ http://www.freewallpapers.to
(14) vb programming langauge အတွက် microsoft developer များရဲ့ http://www.devx.com
(15) ကမ္ဘာ့ ထင်ရှားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ဘို့ဆိုရင် http://www.worldfamousphotos.com
(16) website designer တွေအတွက် http://www.browsershots.org နဲ့ http://www.oswd.org
(17) Photoshop CS3 ကိုသင်ယူချင်ရင် http://photosupport.com
(18) Graphic designer တွေလေ့လာဘို့ http://fantasyartdesign.com
Posted by mr sann oo at 7:06 PM4comments
How it lock files onaUSB Flash Drive, CD-RW or floppy disks?
To protect files on USB Flash Drives, Memory Sticks, Pen Drives and Zip Drives, click 'Browse' and select the option 'Move to portable disk'. Then read the instructions and click the 'Next' button. Now you will be able to select the drive(s) in which you want protection. You can select these drive(s) by clicking the check boxes next to them. After that click the 'Move It' button, this will move the program folder of Folder Lock to that drive. Now you can run the program from that drive and keep the files in the 'Locker' folder it creates and lock them up.
Posted by mr sann oo at 7:34 PM2comments
Posted by mr sann oo at 7:54 PM0comments
Video content, digital photos, music libraries, realistic3-D gaming environments and even TV programs recorded live from satellite can all be stored on today's desktop and mobile PCs. With gigabytes of data being transferred to and from the hard drive, storage performance counts. Intel Matrix Storage Technology helps deliver results in this media-rich computing environment.
Posted by mr sann oo at 7:39 PM0comments
Raid drive နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းကြတယ်..ကျွန်တော်လည်းသိပ်မသိဘူး..စိတ်ဝင်စားလို့ဟိုဖတ်ဒီဖတ်အဆင့်ပဲရှိသေးတာ.. နားလည်တဲ့သူရှိရင်ပြောပြပေးပါလား။ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ What isaRaid Drive Post ကိုဖတ်ကြည့်နိုင် ပါတယ်..
Posted by mr sann oo at 2:54 AM2comments
Posted by mr sann oo at 2:14 AM 1 comments